भरतपुर अपडेट : देवी ज्ञवाली र रेणु दाहालको मतान्तर मात्र ७२ !
ARCHIVE » भरतपुर अपडेट : देवी ज्ञवाली र रेणु दाहालको मतान्तर मात्र ७२ !
भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा एमालेलाई खतरा बढेको छ । पछिल्लो अपडेट अनुसार देवी ज्ञवाली ७२ । पुनः निर्वाचन भएको भरतपुर १९ मा एमालेले अपेक्षित मत पाउन नसकेपछि एमालेको विजय यात्रामा धक्का लाग्ने खतरा बढेको छ ।
१९ वडाको मतगणना सकिँदा देबी ज्ञवालीले ४१ हजार ९४६ मत ल्याएका छन् भने रेणुले ४१ हजार ७२५ मत ल्याएकी छन् । यस्तै उपप्रमुखमा एमालेका उम्मेदवारले ३८६०५ मत पाउँदा कांग्रेसका उम्मेदवारले ४५६२३ मत ल्याएका छन् । भरतपुर २० मा ३३ सय २ मत खसेको छ । तर, यसअघि नै निर्वाचन भएका कारण काँग्रेसको मत देवी र रेणु दुवैका लागि बाँडिएको अनुमान गरिएको छ ।